Ukuzilolonga kukaBarbell luhlobo loqeqesho lokuchasa. Ukuxhathisa uqeqesho kusetyenziswa izihlunu zakho ukuhambisa uxhathiso, zihlala ubunzima. Imizekelo yoqeqesho lokumelana ne-barbell zii-squats, i-bench press, umqolo we-barbell, i-shoulder press, i-deadlifts kunye ne-curls ukubala ezimbalwa. I-Barbells ikuvumela ukuba uhambise ubunzima obungaphezulu kunokuba unokwenza nge-dumbbell kuba unezandla ezimbini kwinto emiselweyo. Oku kuyenza ikhuseleke ngakumbi yokufunda umthambo omtsha.
I-Anti-Slip kunye noyilo oluhlala luhleli: Ezi zindidi zokumelana nomgangatho ophezulu zenziwe ngelaphu eliqinisiweyo kunye nokomelezwa ngombala werabha onganyangekiyo. Ziyaqina kwaye zihlala zomelele ngokuxhathisa okuqinileyo, okwangoku ziqiniswa yimigca yemithungo, ekubonelela ngamava okuhlala uhleli ngaphandle kokuqengqeleka.
Ukuchasana kwamanqanaba ama-3 afanelekileyo: Umbala ngamnye weebhendi ezi-3 zokumelana ezimile kumanqanaba ahlukeneyo oxhathiso: ukukhanya, okuphakathi, kunye nobunzima. Amandla ahlukeneyo aya kukubonelela ngokuguquguquka ngakumbi kunye nokukhetha ngakumbi kwimithambo yakho, Nokuba ungaba ngumqali, umntu onamava, uya kuba nakho ukufeza zonke iinjongo zakho zokuzilolonga.
Intambo yokutsiba yokutsiba kwintambo yokuzilolonga
Smooth and Fast: inkqubo yokuphatha ibhola iyakuphepha ukujija, ukubhijela okanye ukugoba njengezinye iintambo zokomelela komzimba, iqinisekisa ujikelezo oluzinzileyo nolukhululekileyo, njengoko intambo yethu yokutsiba ingathwala umthwalo onzima, ozisa umthambo ogqibeleleyo wokutsiba ngentambo, ikwabonelela ngeyona nto intle Ukutyibilika kwengcali yomzimba elite
Ukomelela kwezemidlalo: umthambo wethu wokutsiba intambo unokumisela ukunyamezela kwe-Cardio, amandla kunye nesantya, ngelixa uphucula uxinzelelo lomzimba wakho wonke. Ukhetho olukhulu kumdlalo wamanqindi, i-MMA kunye noqeqesho lomnqamlezo.